Ny làlamby tsara indrindra any Eropa | Fitsangatsanganana tanteraka
Ny zotra fiaran-dalamby tsara indrindra any Eropa
Fitsangatsanganana tanteraka | | ny hafa
Na eo aza ny zava-misy fa ny fiaramanidina no mbola be mpampiasa indrindra amin'ny fitaterana ataon'ny ankamaroan'ny mponina, ny marina dia nahavita nizotra tsikelikely ny lalamby tamin'ireo làlana fitsangatsanganana, indrindra tany Eropa. Izany dia asehon'ireo fitsangatsanganana an-dalamby samihafa izay niseho, izay mamela ny fivezivezena eo amin'ny firenena samy hafa miaraka amin'ny fanamorana. Etsy ankilany, ny fandehanana lamasinina any Eropa dia tsy mila lafo, raha ny marina azo atao ny mahita ny fifanarahana tsara indrindra amin'ny Omio ary miroso amin'ny traikefa nahafinaritra. Ary ny fotoana natolotry ny lamasinina rehefa mivezivezy dia tokana, mahita toerana tsy mampino amin'ny toe-javatra hafa.
Na izany aza, tsy ireo ihany no mahita ny endrika mahavariana sy ny vidiny mirary indraindray tombony amin'ity fitaovam-pitaterana ity fa manome fiononana lehibe kokoa rehefa mandeha ary, mazava ho azy, mampifandray ny ankamaroan'ny tanàna lehibe. Ity farany dia mitarika làlana maro manerana an'i Eropa, miankina amin'ny tsiro sy ny fahalianan'ny mpandeha. Ankoatr'izay, ny tena fahita matetika dia ireo izay mampifandray ireo renivohitra eropeana na ireo tanàna malaza indrindra eto amin'ny kaontinanta, saingy misy ihany koa ireo maro izay misafidy làlan'ny lamasinina mamela anao hitety firenena iray amin'ny fotoana fohy ary tsy misy zavatra very.
Amin'ireto làlana ireto dia misy miavaka marobe izay nanjary ilaina raha manapa-kevitra ny hanao dia lavitra amin'ny alàlan'ny Eropa izahay. Any Espana dia iray amin'ireo zotra ireo no mandeha ny Transcantábrico manatevin-daharana an'i León miaraka amin'i Santiago de Compostela. Mandritra ny valo andro dia tsidihina ny tanàna maro samihafa any amin'ny morontsirak'i Cantabrian, mankafy ny kolontsaina sy ny gastronomia mahafinaritra ao amin'io faritra io. Any Skotika tsara tarehy dia fitsangatsanganana tena manokana no misy ho an'ireo tia ilay mpamosavy tanora Harry Potter. Mampifandray an'i Glasgow amin'i Mallaig ny lalan'ny lalamby manolotra endrika sahala amin'ny nofinofy izay miavaka i Glenfinnan Viaduct sy ny farihin'i Elit sy Shiel.
Any Alemana dia hahita ny iray amin'ireo làlana tranainy indrindra eto an-tany ianao: ny ala mainty. Mampifandray ny tanànan'i Offenburg sy i Constance ity tsipika ity satria mamakivaky ny ampahany amin'ilay ala mainty mahagaga, mijanona amin'ny toerana mahatalanjona sy tanàna kely eny an-tendrombohitra. Koa satria eto ianao dia tsy mampaninona ny miloka amin'ny lalana mandeha ny tanàna tena ilaina avy any amin'ny firenena. Fa raha mitady làlana tsy hay hadinoina isika dia izay no tanterahin'i ny Bernina Express amin'ny alàlan'i Soisa sy Italia. Ny lalana dia mamaky tionelina 55, tetezana 196, tanàna tranainy indrindra any Suisse ary tanàna kely any Lombardy Italiana. Toy izany ny hatsaran-tarehiny fa nanambara ny làlana ho UNESCO World Heritage Site.
Holland dia firenena iray hafa izay manana làlan'ny hatsaran-tarehy tena tsara, indrindra amin'ny lohataona. Ny antso Ny lalan'ny voninkazo dia manomboka any Haarlem mankany Leiden mandalo saha tulip mahatalanjona misy loko isan-karazany. Na izany aza, ho an'ireo izay te-hijanona akaikin'ny trano dia azo atao foana ny misafidy ny hahita renivohitra toa an'i Paris, London, Brussels na Berlin. Mifampiresaka tsara ireo, ka tsy ho olana ny mifindra eo amin'izy ireo. Farany, tadidio fa ireo zotra ireo dia azo atao koa ivelan'ny Eropa, mandeha lamasinina any Japon, ohatra, amin'ny alàlan'ny pasto manokana an'ny firenena tsirairay izay ahafahanao mivezivezy amin'ny firenena mora sy haingana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Ny zotra fiaran-dalamby tsara indrindra any Eropa
Ahoana ny fomba hitetezana an'i Paris